၁၉။ ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၁၀) ~ မောင်သက်ဝေ
၁၉။ ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း (၁၀)
ကွန်ပျူတာအခြေခံ အပိုင်း(၉)မှာ File တစ်ခုကို ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာကို ရေးသားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်…
အခုအပိုင်းမှာတော့ File တစ်ခုကို ဘယ်လို နာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုတာ ပြောပါမယ်…
You can change the name ofafile to better describe its contents. This makes it easier for you to find the file later. When naming your files, useakeyword that will identify the file, such as the name of the client,aproject or an event.
You can use up to 255 characters to nameafile. You can also include spaces and periods. The only characters you cannot use to nameafile are the symbols \_ / : * ? | “ < or >. If you use periods in the file name, the letters after the last period should be the file’s extension.
File တစ်ခုကို နာမည်ပေးတဲ့အခါ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာမည်ကိုသာ ပေးသင့်ပါတယ်…
ဒါမှသာ မိမိ File ကို ပြန်ရှာတဲ့အခါ လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်…
File ကို နာမည်ပေးပြီးလို့ပိုသင့်တော်တဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းချင်တဲ့အခါ ပြောင်းပေးလို့ ရပါတယ်…
File name ပေးတဲ့အခါ Space နဲ့Period တွေ ထည့်လို့ ရပါတယ်… ဒါပေမဲ့ \_ / : * ? | “ < နဲ့> တွေ ပါလို့မရပါဘူး… File Name မှာ Period သုံးရင် Period နောက်ကစာလုံးက File ရဲ့ Extension ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်… (ဥပမာ… Word နဲ့ ရေးတဲစာဆိုရင် .doc, စာရင်းဇယားဆိုရင် .xls, Note Pad နဲ့ ဆိုရင် .txt စသဖြင့်ပဲ သုံးရမှာပါ)
ပြောင်းပုံ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ -
Right-click the file you want to rename. A menu appears.
မိမိပြောင်းလိုတဲ့ File ကို Select လုပ်ပြီး File ပေါ်မှာ Mouse Right Click လုပ်လိုက်ရင် Pop-up Menu ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်…
Click Rename. A box appears around the file name.
Pop-up Menu(Shortcut Menu) ထဲက Rename ဆိုတာကို Click လုပ်ရင် File name မှာ အပြာရောင် Box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်…
Typeanew name and then press the Enter key.
မိမိပြောင်းပေးလိုတဲ့ File name ကို ရိုက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ…
Note: You can edit the file name instead of replacing the entire name. Click the file name where you want to make the change.
If you change your mind while typinganame, press the Esc key to return to the original name.
မှတ်ချက်အနေနဲ့မိမိ File ရဲ့ နာမည်တစ်ခုလုံးကို မပြောင်းပဲ ပြင်မယ်ဆိုရင် ပြင်ချင်တဲ့နေရာမှာ Click လုပ်ပြီး ပြင်လို့ ရပါတယ်…
အဲလိုနာမည်ပြောင်းနေစဉ်မှာ ပြောင်းလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိတော့ရင် Esc Key ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့မူလနာမည်ပဲ ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ…
Rename File using Keyboard
Keyboard နဲ့File နာမည်ပြောင်းခြင်း
Click the name of the file you want to rename.
မိမိနာမည်ပြောင်းလိုသော File Name ကို Click လုပ်ပါ… တစ်နည်း Select လုပ်ရမှာပါ…
Press the F2 key to select the current name.
Keyboard က F2 Key ကို နှိပ်လိုက်ပါ…
မိမိပြောင်းလိုတဲ့ File နာမည်အသစ်ကို ရိုက်ရုံပါပဲ… ပြီးလျှင် Enter Key ကို နှိပ်ပါ…
ခုတစ်ခါ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပါမယ်…
Can I rename folders?
Folder တွေကိုရော နာမည်ပြောင်းနိုင်ပါသလား…
You can rename folders, but make sure you only change the names of folders that you created. If you change the names of program or system folders, Windows will not be able to find the files it needs to operate.
Folder တွေကိုလည်း မိမိပေးထားသောနာမည်ကို ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းပေးလို့ ရပါတယ်… ဒါပေမဲ့ Program နဲ့System Folder တွေရဲ့ နာမည်ကို လုံးဝ မပြောင်းသင့်ပါဘူး… ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်တဲ့အခါ Windows က သိတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး…
Can I use the same file name for two different files?
မတူညီတဲ့ File နှစ်ခုကို နာမည်တူ ပေးနိုင်ပါသလား…
You can use the same file name for two different files. If the files are located in different folders.
မတူညီတဲ့ File နှစ်ခုကို နာမည်တူ ပေးနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ အဲဒီ File တွေဟာ မတူညီတဲ့ Folder ထဲမှာ ရှိနေရမှာပါ…
Folder တစ်ခုတည်းက File နှစ်ခုကိုတော့ နာမည်တူပေးလို့မရပါဘူး… စက်က ပြန်မေးပါလိမ့်မယ်…
ဥပမာ- လွမ်းက Folder တစ်ခုထဲက File တစ်ခုကို နာမည်တူပေးမိရင် ပေါ်လာတဲ့ Box က-
တကယ်လို့လွမ်းက တစ်ခြား Folder တစ်ခုထဲကနေ နောက် Folder တစ်ခုထဲကို နာမည်တူတဲ့ File တစ်ခုကို ကူးလာခဲ့ရင် ပေါ်လာတဲ့ Box က -
Windows7မှာ ရွေးချယ်စရာ သုံးမျိုးပေါ်လာမှာပါ…
ပထမတစ်ခုက Copy and Replace ပါ… တကယ်လို့အဲဒါကို Click လုပ်လိုက်ရင် နဂိုရှိပြီးသား File နေရာမှာ နောက်ပြောင်းလာတဲ့ပုံက နေရာယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက Don’t Copy ပါ… ဒါကို Click လုပ်ရင်တော့ မကူးတော့ပဲ နဂိုအတိုင်းပဲ ရှိနေမှာပါ…
နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုက Copy, but keep both files ဆိုတာလေးပါ… အဲဒါကို Click လုပ်ရင်တော့ File Name မှာ (2) ဆိုပြီး နှစ်ခုစလုံးကို သိမ်းထားပေးမှာပါ…